Wasiirka arrimaha gudaha: “kuma qanacsani hanaankeey u shaqeeyaan booliska” | Somaliska
Wasiirka arrimaha gudaha: “kuma qanacsani hanaankeey u shaqeeyaan booliska”
Wasiirka arrimaha gudaha dalkaan Iswiidhan, ayaa aad u dhaliilay hanaanka ay u shaqeeyaan booliska gaar ahaan arrimaha ka hortaga dembiyaddaa oo uu sheegay ineeysan aheyn kuwo wax ku ool ah.
Hadalkan ayuu sheegay maanta mar uu ka hadlayey degmadda Visby eetoddobaadkii Almedalen oo ay ku urruursan yihiin dhamaan mas’uuliyiinta dowladda iyo asxaabta siyaasadeed ee dalka, halkaas oo dhinacyo badan oo amuuraha dalka loogaga hadlo sanad kasta. Wasiirka ayaa sidoo kale aad uga guuxay ciidanka booliska iyo sideey u maareeyaan arrimaha la dagaalanka kooxaha hubeeysan, waxaana isagoo arrintaasi carabka ku adkeeynaya sheegay inuusan ku qanacsaneyn habkeey wax u wadaan.
“Maya kuma qanacsani xaqiiqdii” ayuu yiri wasiir Ander Ygeman, oo misna dhinaca kale farta ku fiiqay in ay habooneyd in boolisku dhowr dembi ay maareeyn kareen waa sida hadalka uu dhigaye. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in boolisku soo maray xilliyo adag oo ay ka ku howl galeen”marxalado adag”
“Waxaa la sameeyey isku shaandheeyntii ugu weeyneeyd tan iyo sanadkii 1965-tii, qaabilaadii ugu weeyneeyd misna tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, kor u qaadista lugu sameeyey ka hortaga hanjabaadaha kooxaha argagaxisadda iyo markii ugu horeeysay muddo labaatan sanno ah oo xuduudaha dalka laga hirgaliyey baaritaanno” Ayuu yiri wasiirka oo muujinayey xilliyadda kala duwan ee booliska dalka howl gallo kala duwan qabteen, misna uu dhaliil kala dul dhacay.
Dhinaca kale suxufiga lugu magacaabo Johan Delby oo ah falan qeeye arrimaha bulshadda ee wargeyska Dagens Samhälle, ayaa isagoo ka hadlaya su,aasha ah in “Iswiidhan ay tahay jannadii dambiileyaalka” ayaa si adag uga soo horjeestay eedda wasiirka.
“Maya waxaan runsanahay ineey tahay cinwaan xun waa inaan sidaas iraahdaa, is bar bar dhig hadaan ku sameeyno booliska Iswiidhan iyo Yurubta kale si wanaagsan ayey booliska Iswiidhan u shaqeeyaan” ayuu yiri Johan Delby oo falanqeeye ka tirsan wargeyska Dagens Samhälle ee ka soo baxa Iswiidhan.
Wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay boolis badan oo la howl geliyo, iyadoo ay haatan si weyn kuliyadaha ciidamadda ay aqbaleen tiraddii ugu badneyd ardeyda dooneeysa ineey noqdaan boolis, hadafkuna yahay in 10.000 (tobban kun ) oo askari oo dheeraad ah la shaqaaleeysiiyo. Isku soo duuboo dowladda ayaa walaac ka muujineeysa falalka kooxaha burcada ah ee magaalooyinka qaar ku soo batay iyo kooxaha argagaxisadda ah oo mudooyinkii ugu dambeeyey loaftooda falal argagaxiso ka fuliyey meelo kala duwan oo qaaradda Yurub ah, dalkaan Iswiidhan ayaa hortaantii bishii abriil nin gaari dad xamuul ah ku jiirsiiyey magaaladda Stockholm caasimadda Iswiidhan, halkaas oo ku dilay 4 ruux. Arrimahan ayaa la oran karaa waa waxyaabaha walaaca dhaliyey ee uu wasiirku afka la furtay.
Raysal wasaaraha Sweden iyo wasiirka arimaha dibeda oo ka qeyb galaya shirka London
Shirkii hogaamiyeyaasha Midowga Yurub oo maanta Göteborg ka furmay